Xisbiyada Mucaaradka Somaliland oo ku dhawaaqay Isbaheysi Siyaasadeed - Awdinle Online
Xisbiyada Mucaaradka Somaliland oo ku dhawaaqay Isbaheysi Siyaasadeed
Kulan ay Maanta Magaalada Hargeysa ee degaannada Soomaliland ku yeesheen Hoggaanka Xisbiyada mucaaradka Soomaliland ee WADANI iyo UCID ayaa waxaa ay kaga dhawaaqeen Isbhayesi siyaasadeed oo ay ku mideysan yihiin.
Kulankooda ayaa waxaa ay sidoo kale labada Xisbi ku Magacaabeen guddi ka kooban 10 Xubnood, kuwaas o ah Guddiga Isbaheysiga Xisbiyada mucaaradka ee hoggaaminta Golaha Wakiilada iyo Golayaasha degaanka.
Sababaha ay labada Xisbi ee Mucaaradka u Magacaabeen Guddiga ka kooban 10 Xubnood ayaa waxaa ay ku sheegeen laba qodob, kuwaas oo kala ah.
1:In la dardar geliyo howlaha wada-shqeynta labada Xisbi Mucarad
2: in wadatashi joogto ah ay sameeyeen labada Xisbi ee Mucaaradka ah.
Hoggaanka Xisbiyada mucaaradka Soomaliland ee WADANI iyo UCID ayaa sidoo kale ujeedkooda Isbaheysiga ay u sameeysteen waxaa lagu sheegay inay tahay sidi ay ku hanan lahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoonka wakiillada Somaliland.
Sidoo kale Xisbiyada Mucaaradka ee Kulmiye iyo UCID ayaa ujeedka Isbahyeysigooda waxaa uu yahay sidii ay uga hortegi lahaayeen in hogganka Golaha Wakiilada uu la wareego Xisbiga talada haya ee Kulmiye, kaas oo uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Previous articleAMISOM oo bayaan kasoo saartay Duqeymaha ciidamada Kenya ka geysteen Gobolka Gedo
Next articleKenya oo sheegtay inay dishay Xubno ka tirsan Al-Shabaab